I-MONSTER HUNTER ITYHILWE KWIITHIYETHA ZAMATSHAYINA NGAPHEZULU KOBUHLANGA - CHINA
Ujamie Lee Curtis
I-Monster Hunter ityhilwe kwiiThiyetha zamaTshayina ngaphezulu kobuhlanga
Ifilimu yesenzo esimnandi Monster Hunter yayinazo zonke izinto ezazenziwe kwimpumelelo yamanye amazwe: ifilimu yayisekwe kumdlalo odumileyo weCapcom, ibinomdlalo wabalingisi bamazwe aphesheya, kwaye yaxhaswa Ukungcola kwabahlali ‘NguPaul W.S. UAnderson. Kodwa umboniso wemizuzwana elishumi kule filimu, obonisa ubuhlanga, ubangele ingqumbo kumazwe aphesheya. IiCinema kwiChina yonke zitsala ifilimu emva kweeyure zivuliwe ngenxa yomsindo kwi-Intanethi.
Umboniso obonisa umlobi / umlingisi wase-Asia-waseMelika uJin Au-Yeung (aka MC Jin) othi, Jonga amadolo am. Luhlobo luni lwamadolo olu? IsiTshayina. Isicatshulwa sibhekisa kwi indawo yokudlala enobuhlanga Oku kuye kwabamba abantu abaninzi abavela kwimvelaphi yaseAsia.
Ukubhala okuhle kwifilimu yeMonster Hunter… pic.twitter.com/jTRnKOClCi
Iimfazwe zeenkwenkwezi ze-finn kunye ne-poe
-Daniel Ahmad (@ZhugeEX) NgoDisemba 4, 2020
Ngapha koko, isihlokwana esingaguqukiyo sesiTshayina sendawo leyo ikwabangele umsindo. Ngokokungafaniyo, indawo leyo yaqala ukucaphukisa ngenxa yokubhekiswa emadolweni nasekuguqulweni kwamadolo, kudala uqhwithela olugqibeleleyo lobuhlanga kunye nokubandlululwa kwabantu okukhawuleze ukucaphukisa abaphulaphuli baseTshayina. Uninzi luye kwiqonga losasazo laseTshayina u-Weibo, apho ibinzana elithi Monster Hunter lithuka iChina ngokukhawuleza laqala ukuhamba:
Ukwenza eli hlaya libe lelasekhaya, abaguquleli benza le ncoko yabhekisa kubuTshayina bokuhlala nabantu ngendlela amadoda afanele ukuba nesidima ngayo kwaye angaguqi ngokulula. Amadoda anegolide phantsi kwamadolo abo, kwaye baguqe kuphela ezulwini kunye noonina, eli lizwi lihamba ngolwimi oluguquguqukayo, elithetha ukuba nangaliphi na ixesha umntu eguqa ngamadolo, iya kuba sisihlandlo esixabisekileyo njengegolide.
Umxholo wonxibelelwano kwisicengcelezo sobuhlanga esivela kumagama athi amadolo kunye nesiTshayina esidityaniswe nemibhalo engezantsi 'malunga nokuguqa ngamadolo kubonakala ngathi senze ukuba ababukeli abancinci bethanda ilizwe bakholelwe ukuba umzuzu wesiNgesi kufuneka ube sisithuko esicacileyo. Okubi nangakumbi kukuba uninzi lucinga ukuba uguqulo-olutshintsha lubhekise kwigolide kwaye lungakhankanyi isiTshayina -yayisisikhuselo ngabom solwaphulo-mthetho.
Kwaye ngaphandle kwemithetho engqongqo yokunyanzelwa kweTshayina, utshintshiselwano ngandlela thile lwangena kwisiphelo sokugqibela kungakhankanywanga imeko yengxaki. Imifanekiso ye-Tencent, iqabane elivelisa umboniso bhanya-bhanya ojonga ukuhanjiswa kweTshayina, uzama ukukhupha kwakhona Monster Hunter nomfanekiso ususiwe, kodwa umonakalo sele wenziwe. Akucaci nokuba ifilimu izakubuya, isuswe indawo okanye hayi, kwiithiyetha zaseTshayina.
Ukuqhawulwa konxibelelwano phakathi kwamazwi esiNgesi kunye nemibhalo engezantsi yamaTshayina kukhokelele ekubeni abantu bakholelwe ukuba yonke loo nto ibiyinjongo kwaye ukubuyela umva kumajelo eendaba kuye kwaqina njengoko abantu baya beqiniseka ukuba yinto encinci ngokuchasene nabantu baseTshayina.
-Daniel Ahmad (@ZhugeEX) NgoDisemba 5, 2020
Kwaye umsindo wabaphulaphuli awukhawulelwanga kwifilimu kuphela. Umdlalo weCapcom Ihlabathi leMonster Hunter ukuphononongwa ngebhombu kwi-Steam, njengoko ngaphezulu kokuphononongwa okungathandekiyo okungu-1 000 kuye kwafika kwisiza ukusukela izolo. ICapcom Asia ikhuphe ingxelo isusa kude kwifilimu eWeibo, isithi Emva kokufunda izimvo zakho malunga nomdlalo bhanyabhanya Monster Hunter , Siqokelele izimvo zomntu wonke kwaye sayixela le meko kwiinkampani ezifanelekileyo, songeza ukuba sinethemba lokuqhubeka nokufikelela kulindelo lwakho kwixesha elizayo.
Impazamo enkulu yefilimu iyadanisa ngakumbi xa ucinga ukuba inabalingisi abahlukeneyo. UMilla Jovovich, uTony Jaa, uMc Jin, uMegan Good, uTI, kunye noGeorge Boneta bonke bavela kwifilimu malunga neqela lamajoni ethunyelwa ngesiquphe kwihlabathi elizaliswe zizilo ezikhulu. Monster Hunter 'I-gaffe sisikhumbuzo esikufike ngexesha lokuba iindidi ezahlukeneyo azikhuphi bhanya-bhanya yobuhlanga okanye iingcinga ezigwenxa.
Monster Hunter isekhona ngenxa yenkulumbuso eMelika nge-25 kaDisemba, kodwa akucaci nokuba imeko ekhubekisayo iza kuhlala isikiwe eMelika.
Uyenze njani le nto imbi kangaka. Konke okufuneka ukwenze kukuba ube noMilla Jovovich ehlwitha izilo zeCG kwimpahla yomqolomba kunye nekati yokupheka isidlo sangokuhlwa. Unokuba uprinte imali. Uhambe njani ukusuka apho ukuya apha
- mcc (@ mcclure111) NgoDisemba 5, 2020
(nge Ezahlukeneyo , Umfanekiso obonisiweyo: UCoco Van uvula ukufota)
Izinto Esizibonileyo Namhlanje 2
Ujessica Parker Kennedy
I-ladykiller kubunqunu obubophileyo
i-baccano ngasemva kwabadlali belizwi
ehlathini emva koko
kwenzeke ntoni ngobusuku obungaphezu kwendalo
I-addams yosapho show TV 90s